IFILIMU YENETFLIX YETRIPLE FRONTIER YENETFLIX: UMHLA WOKUKHUTSHWA, ISAKHELO, IYELENQE, ITREYILA- IRADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Ikhutshwa nini iTri Frontier kwiNetflix? Ngubani okwi-cast kwaye imalunga nantoni?
Isenzo seNetflix esineenkwenkwezi zakutshanje esenziwe ngeflick Triple Frontier sifika kwinkonzo yokusasaza ngalo Matshi.
Ifilimu, ejikeleze iqela lamajoni omkhosi aqhekeza isicwangciso esiyingozi sokweba ibharon yeziyobisi, yabhalwa ngu-The Hurt Locker kunye no-Zero Dark Thirty screenwriter u-Mark Boal kwaye wakhokelwa ngu-JC Chandor, owaziwa kakhulu ngo-hard- Ukubetha idrama Owona Nyaka Ubundlobongela.
Ukukhutshwa kweNetflix ngo-2019: Zonke iinkqubo ezinkulu zeTV ezizayo zityhilwe
Zonke iifilimu zoqobo zeNetflix ezizayo kulo nyaka
Mamela iRadioTimes.comIPodcast ngoku: rhuma kwi iTunes / Rhuma kwiiPodcasts zikaGoogle
Inomdlalo wokuqhekeka, oquka u-Oscar Isaac, Ben Affleck, Garrett Hedlund, Pedro Pascal noCharlie Hunnam.
Fumanisa Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neTriple Frontier apha ngezantsi.
Ikhutshwa nini iTri Frontier kwiNetflix?
Ifilimu iya kusasazwa kwihlabathi liphela kwiNetflix ukusuka NgoLwesithathu 13ti kaMatshi 2019 .
Ngubani okwi-Triple Frontier cast?
Ifilimu isekwe kwi-quintet esembindini yamajoni omkhosi wase-US, abunjwe nguBen Affleck, u-Oscar Isaac, uCharlie Hunnam, uPedro Pascal noGarret Hedlund.
UGarrett Hedlund (uBen), u-Oscar Isaac (uPapa), uBen Affleck (Redfly), uCharlie Hunnam (Ironhead), kunye noPedro Pascal (Catfish) e-Triple Frontier
I-Adria Arjona (i-Pacific Rim: Uqhankqalazo, uMcuphi oyinyani) kunye noReynaldo Gallegos nabo bayinkwenkwezi.
Ithetha ngantoni iTrip Frontier?
Ifilimu ibona uPapa ka-Oscar Isaac eqhekeza isicwangciso sokuphanga izigidi zeedola kwindawo yeziyobisi eMzantsi Melika. Ukwenza njalo, ucela uncedo kubabesakuba ngumkhosi wakhe, uRedfly (Affleck), uBen (Hedlund), Ironhead (Hunnam) kunye noCatfish (Pascal). I-quintet inamava njengengubo yasemkhosini kwaye inakho ukusebenzisa izixhobo ngokwaneleyo, ngenxa yoko babona ukuba banokutsala ngaphezulu kwisaphuli-mthetho esoyikisayo uGabriel Martin Lorea (Gallegos).
Bonke abahlanu bavakalelwa kukuba ilizwe labo alikhange libakhathalele ngokwaneleyo kwiminyaka ebuyileyo emfazweni, kwaye baqale ukuzisola ngokunikezela ulutsha lwabo ukuba lukhonze. Nangona ekuqaleni besilwa nefuthe le-heist, baziva ngathi banokuhlala kunye nomonakalo abanokuthi bawubangele (icebo labo libandakanya ukubulala umntu omnye: uLorea ngokwakhe, ulwaphulo-mthetho olubi).
Kodwa, ewe, izinto azihambi ngqo ekucwangcisweni. Njengoko iheist iqhubeka, baqala ukubuza ezabo izizathu. Ixabisa malini idola? Ngena kwiNetflix ukufumanisa…
Ngaba ikhona itreyila yeTriple Frontier?
Ngaba iTrontier Frontier ilungile?
Ewe-isebenza kumanqanaba amabini: njengemifanekiso bhanyabhanya ye-heist, nanjengomdlalo ojonga ngxi ubungxowankulu, ukunyoluka nokunyanga amagqala omkhosi eMelika.
Ayiphenyi le micimbi ngokugqibeleleyo njengefilimu yangaphambili kaChandor Owona nyaka Unobundlobongela okanye ukusebenzisana kukaBoal Kathryn Bigelow, mhlawumbi ngenxa yokuba kuye kwalinganiselwa ngaphezulu kwentshukumo kunedrama, kodwa kusamangalisa ukucinga.
Ngapha koko, ubuhle bendawo kumdlalo-uninzi lwezenzo zenzeka ngaphakathi nakwiindawo ezikufutshane neAndes kumazwe ahlukeneyo akuMzantsi Melika- iyamangalisa, kwaye u-Affleck no-Isaac bakwimo ephezulu. Siyicebisa kakhulu…
I-Triple Frontier ikhutshwa kwi-Netflix ngoLwesithathu we-13 kaMatshi 2019
ukubulala i-eve series 2 cast
amazon umlilo for kids unlimited
yiphi inkosazana yeDisney
liza kuphuma nini ixesha elitsha le-fortnite
i-hatton garden ka-2019
liverpool vs barcelona free live umsinga